Banye na Twitch ozugbo | Nzukọ mkpanaka
Banye na Twitch ozugbo
Edere Ferreno | 24/09/2021 18:00 | Mmemme
Twitch abụrụla otu n'ime nyiwe kachasị ewu ewu n'ụwa niile n'etiti ndị na -egwu egwuregwu ịntanetị. Ọ ga -ekwe omume na ọtụtụ mmadụ na -enweta ya site na nyiwe ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ imepe akaụntụ ma ọ bụ tinye nke gị, ị ga -eme ya ozugbo n'elu ikpo okwu nke ha.
Ịbanye na Twitch bụ ihe na -eweta obi abụọ n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ. Maka nke a, anyị na -agwa gị ụzọ anyị nwere ike isi tinye akaụntụ anyị, yana ụzọ enwere ike ịmepụta akaụntụ na ọrụ a ma ọ bụ ụzọ anyị nwere ike isi weghachite paswọọdụ anyị ma ọ bụrụ na anyị efunahụ ya.
Banye na Twitch na -anwụ anwụ ịnwale Ọ bụ ihe nwere ike bụrụ ihe ịma aka n'ọtụtụ ọnọdụ, ma ọ bụrụ na i jitụbeghị ọrụ a mbụ. Ọ bụ ya mere anyị ji akọwa usoro ị ga -eso na nhọrọ dị iche iche anyị nwere, ka usoro a wee dịrị gị mfe mgbe niile. N'ụzọ dị otú a, ị ga -enwe ike isonye na nnukwu obodo ịntanetị a wee nwee ọ enjoyụ egwuregwu ma ọ bụ mgbasa ozi ndụ nke ndị egwuregwu ama ama ma ọ bụ ndị na -ekwu okwu.
1 Banye na Twitch site na ihe nchọgharị
2 Mepụta akaụntụ na Twitch na ihe nchọgharị
3 Banye na ngwa Twitch
4 Otu esi enweta ohere ịbanye na akaụntụ gị
5 Uru nke ịdebanye aha maka Twitch
Banye na Twitch site na ihe nchọgharị
Nke mbụ n'ime nhọrọ anyị ga -abanye na Twitch bụ ime ya site na ihe nchọgharị anyị, ihe ga -ekwe omume na ngwaọrụ ọ bụla, dị ka na PC anyị. Nke a bụ nhọrọ dị nfe ịnweta akaụntụ anyị, yabụ na ọ kwesịghị igosipụta ọtụtụ nsogbu maka ọtụtụ. Nzọụkwụ anyị ga -eso n'okwu a bụ:
Mepee ihe nchọgharị ị na -eji na PC gị.
Gaa na webụsaịtị Twitch (ị nwere ike chọọ ya na igwe nchọta gị) ma ọ bụ gaa ozugbo na www.twitch.tv.
Ọ bụrụ na webụsaịtị ahụ dị n'asụsụ Bekee, ị nwere ike tinye ya n'asụsụ Spanish na ala ihuenyo ahụ.
Pịa na nhọrọ nbanye na n'elu aka nri.
Tinye aha njirimara na paswọọdụ gị.
Ọ bụrụ na ị na -eji ikpo okwu sitere na Facebook, pịa na nhọrọ Jikọọ na Facebook na ala.
Chere maka nbanye.
Site na usoro ndị a, anyị enweela ike banye na akaụntụ Twitch anyị ozugbo na ihe nchọgharị kọmputa anyị, ihe nwekwara ike ime na ihe nchọgharị ọ bụla (Chrome, Edge, Firefox ...). Nke a bụ ihe anyị nwere ike ime na ekwentị anyị, mbadamba ma ọ bụ kọmputa na nkasi obi zuru oke. Yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ịnweta.
Mepụta akaụntụ na Twitch na ihe nchọgharị
O yikarịrị ka ị nwere mmasị ịmalite iji Twitch yana ịchọrọ ịnweta ya site na ihe nchọgharị na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị banyebeghị n'elu ikpo okwu a, ị nweghị akaụntụ ugbu a, yabụ ị ga -edebanye aha na ya. E nyekwara anyị ohere ijikọ ya na akaụntụ Facebook anyị, mana ọtụtụ na -ahọrọ idobe akaụntụ abụọ a iche, nke kwere nghọta. N'ọnọdụ ọ bụla, usoro ịmepụta akaụntụ na Twitch yiri ịbanye, yabụ ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla.
Mepee ihe nchọgharị na kọmputa gị.
Gaa na webụsaịtị Twitch ma ọ bụ jiri ọchụchọ chọọ web.
Pịa na nhọrọ Ndenye aha dị n'elu aka nri nke ihuenyo ahụ na weebụsaịtị.
Tinye aha njirimara ịchọrọ iji.
Tinye paswọọdụ maka akaụntụ gị wee megharịa paswọọdụ ahụ.
Tinye ụbọchị ọmụmụ gị na nọmba ekwentị ịkpọtụrụ ma ọ bụ jiri adreesị ozi -e ma ọ bụrụ na -amasị gị.
Mgbe ịmechara ozi a, pịa bọtịnụ ndekọ na ala.
Na usoro ndị a ị mepụtara akaụntụ na Twitch site na ihe nchọgharị. Ị nwere ike ịnweta ya n'oge ọ bụla, na ụdị ọ bụla nke ikpo okwu a (ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwa na gam akporo), ebe ọ bụ na ị ga -eji aha njirimara na paswọọdụ gị oge ọ bụla ịchọrọ ịbanye na Twitch, yabụ nke a bụ ihe ga -adị mfe karị.
Banye na ngwa Twitch
Ndị ọrụ chọrọ nwere ike tinye akaụntụ Twitch ha site na ihe nchọgharị, n'agbanyeghị na ọrụ a nwekwara ngwa nke ya. Enwekwara ọtụtụ ụdị ngwa a. Ebe anyị nwere ike ibudata ụdị ngwa desktọpụ, nke anyị nwere ike ịwụnye na kọmpụta, yana ngwa ya maka ekwentị mkpanaaka (dị na gam akporo na iOS). Yabụ dabere na ebe anyị chọrọ ịbanye n'elu ikpo okwu a, anyị nwere ike họrọ ụdị nke anyị chọrọ ibudata.
Iji banye na Twitch na ngwa ahụ, anyị ga -emerịrị ya buru ụzọ mepụta akaụntụ n'elu ikpo okwu. Ọ ga -ekwe omume na ihe kachasị mfe bụ imepụta ya na webụsaịtị gị, dịka anyị gosiri gị na ngalaba nke abụọ. N'ụzọ dị otu a, mgbe ibudatara ụdị ngwa ịchọrọ iji, naanị ị ga -abanye aha njirimara na paswọọdụ wee nwee ike ịbanye na akaụntụ gị ozugbo. A na -eme ka usoro a dị mfe n'ụzọ dị otú a.
Ọ bụrụ na anyị ebudatarala ụdị ngwa ọ bụla, mgbe ahụ anyị ga -aga n'ihu na nbanye ahụ. Nke a bụ usoro dị nfe, yiri nke anyị ga -eso na ụdị ihe nchọgharị ya. Yabụ na onweghị onye ga -enwe nsogbu ịbanye na ngwa Twitch, ma ọ bụ desktọpụ, gam akporo, ma ọ bụ ngwa iOS. Nzọụkwụ anyị ga -eso iji nwee ike ime nke a bụ:
Budata ngwa ịchọrọ iji (ụdị maka PC, gam akporo, Mac ma ọ bụ iOS).
Mepee ngwa na ngwaọrụ gị.
Pịa na nhọrọ nbanye nke na -egosi n'ihuenyo.
Chere ka ndepụta ihuenyo gị buo ibu.
Otu esi enweta ohere ịbanye na akaụntụ gị
Mgbe ị na -abanye Twitch ma na -achọ ịbanye, ọ nwere ike ime nke ahụ anyị echefuola paswọọdụ nnweta anyị. Nke a bụ nnukwu nsogbu, maka na ọ gaghị ekwe anyị omume iji akaụntụ anyị na ọrụ a. Agbanyeghị dị ka ọ dị na akaụntụ ọ bụla dị mkpa ịnweta paswọọdụ ịnweta, enwere ụzọ ọ bụla iji nwetaghachi ohere ịnweta akaụntụ anyị n'elu ikpo okwu, ka anyị nwee ike iji okwuntughe ọhụrụ na akaụntụ ahụ. Nke a bụ ihe anyị nwere ike ime site na isoro usoro ndị a:
Gaa na Twitch wee nwaa ịbanye (ọ nwere ike ịka mma na ihe nchọgharị na PC gị) site na ịpị bọtịnụ nbanye na akuku aka nri elu.
Tinye data gị (aha njirimara na paswọọdụ).
Pịa na Inwe nsogbu ịbanye?
Na mpio ọhụrụ nke gosipụtara, tinye adreesị email gị ma ọ bụ akara ekwentị ejikọtara na akaụntụ gị.
Pịa na Gaa n'ihu.
Chere ka ịnweta email ebe ị ga -enwe ike ịtọgharịa okwuntughe gị.
Pịa njikọ dị na email ahụ.
Biko tinye okwuntughe ọhụrụ.
Biko gosi okwuntughe ọhụrụ a.
Ị nwere ike ugbu a banye na Twitch ọzọ.
Ihe dị mma bụ na mgbe anyị zitere arịrịọ ahụ ka anyị nwee nsogbu ịbanye na akaụntụ anyị na Twitch, ikpo okwu zitere anyị email n'ime nkeji ole na ole. N'ime ozi -e ahụ anyị nwere njikọ nke anyị nwere ike ịpị ka anyị nwee ike gbanwee okwuntughe nke akaụntụ anyị wee tinye nke ọhụrụ, nke anyị ga -echeta ma ọ bụ nke nwere nchekwa karịa, ma ọ bụrụ na nsogbu bụ na mmadụ abanyela na akaụntụ anyị n'enweghị ikike. . Mgbe ịchọrọ ịbanye na akaụntụ gị ọzọ na ụdị ngwa ọ bụla, ị nwere ike iji okwuntughe ọhụrụ a n'ime ya wee banye na nke ọma.
Uru nke ịdebanye aha maka Twitch
Twitch abụrụla otu n'ime nyiwe kachasị ewu ewu n'ụwa nke egwuregwu gụgharia. Otu njiri mara mma dị na ya bụ na anyị nwere ọnụ ọgụgụ ndị ama ama ama ama, ndị na-eme mgbasa ozi ndụ mgbe ha na-egwu egwu ma ọ bụ ndị na-ekwukwa maka egwuregwu. Yabụ na eziokwu na enwere nnukwu aha n'elu ikpo okwu bụ ihe doro anya na -enyere ọtụtụ ndị ọrụ aka imepe akaụntụ na ya. Enwekwara nnukwu ọwa mmiri n'asụsụ niile, site na Bekee ruo Spanish, nke bụ akụkụ ọzọ na -enye aka na ewu ewu n'ụwa niile.
Twitch bụkwa ezigbo ikpo okwu ma ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ịgbasa ọdịnaya nke gị. Enwere ọtụtụ nhọrọ ime ya yana ị nwekwara nnukwu obodo taa, nke na -aga n'ihu na -eto, yabụ, nke a bụ ihe na -eme ya mmasị ọtụtụ. Ịdị adị nke ụdị ndenye aha dị iche iche, yana ụdị ụgwọ ya, na -eme ka ọtụtụ gbanwee ya, n'ihi na ha na -enye anyị ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ bara uru. Maka ma onye mepụtara ọdịnaya yana onye ọrụ ga -ahụ ya enwere ọtụtụ uru.
Akụkụ dị mma bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ilele mgbasa ozi na -ebi ndụ ma ọ bụ nwee ike ịnọ na egwuregwu, ị nwere ike iji Twitch na -akwụghị ego, nke na -eme ka ọ dabara adaba. Ikpokoro nwere nhọrọ maka ụdị ndị ọrụ niile, yabụ ị nwere ike ịchọta ụdị dabara gị mma, n'efu ma ọ bụ site na ịkụ nzọ na ndenye aha akwụ ụgwọ ga -enye gị ohere ịnweta ọrụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Banye na Twitch ozugbo